musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » KAZA Visa inowanikwa kuZambia kufamba
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Zimbabwe Breaking News
Zambia Tourism Agency yakazivisa kuti vafambi vekunze vanoenda kuZambia vava neKAZA Visa iripo yekushandisa. Visa iri kutopihwa kuBorder ina (Kenneth Kaunda International, Harry Mwaanga Nkumbula International Airport, Kazungula, neVictoria Falls Border) kuZambia.
Mitemo yakapfuura uye mamiriro anotonga iyo KAZA Visa anoramba akafanana. Iyo vhiza inoshanda kune nyika dzenyika makumi matanhatu neshanu dziri muchikamu B runyorwa pamitemo yemavisa eZambia neZimbabwe.
Iyo KAZA Visa muripo ndeyeUS $ 50, uye inopihwa painosvika chete pazviteshi zvina zvekupinda zvinoratidzwa pamusoro. Iyo vhiza inopihwa pane akawanda ekupinda hwaro pakati penyika mbiri uye inoshanda kwemazuva makumi matatu.
Kune chero kujekeswa uye rumwe ruzivo, bata Zambia Tourism Agency ku
[email inodzivirirwa] or [email inodzivirirwa]